01/01/2012 - 02/01/2012 | အိမ့်မှူးသော်
ဒီတခါ ကျွန်တော် photoshop ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် CS5လေး တင်ပေးထားပါတယ်။ Key ပါ ပါတယ်ဗျာ။ဆိုက်ကတော့ တော်တော်ကြီးတယ်ဗျာ။ ဖိုင်သုံးဖိုင်ခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲဗျာ ဒေါင်းမယ့်သူများ အတွက်တော့ ဖိုင်သုံးဖိုင်ကို Folder တစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့ ဖိုင်ကိုဖြေပါ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Gmail to facebook and facebook to Gmail မက်စေ့ပို့မယ်
ဒီနည်းလေးက ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ မသိသေးသူများအတွက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ Gmail ကနေ Facebook ကိုဖြစ်ဖြစ် Facebook ကနေ Gmail ကိုဖြစ်ဖြစ် မေးပို့တဲ့ နည်းလေးပါ။ အရင်ဆုံး Facebook ကနေ Gmail ကိုပို့တဲ့နည်းလေးပြောပြပါ့မယ်။ ကျွန်တော် တို့ Facebook မှာ ရိုးရိုး မက်စေ့ ပို့သလိုပါပဲ ။ Send message ကိုခေါ်လိုက်ပါ။ To ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိမိပို့ချင်သော သူရဲ့ gmail ကို အပြည့်အစုံရိုက်ထည့်ပါ။ ဒါဆိုရင် gmail ထဲကို မေးလ် ရောက်သွားပါပြီ။ ဒီနေရာမှတစ်ခုသတိထားရမှာက ကျွန်တော်တို့ ဖေ့ဘွတ်ကိုလည်း name@facebook.com ဆိုတာကိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ မရှိရင်ပို့လို့မရပါဘူး။ မရှိသေးဘူးဆိုရင် ဒီလိုစာတန်းလေး ပေါ်လာပါတယ်။To send to an email address, first set up your own facebook.com email address . အဲဒီကောင်လေးကို ကလစ်ပေးလိုက်ပါ။ Facebook က အော်တို နာမည်လေး ပေးပါလိမ့်မယ်။ဥပမာ -bluegyi@facebook.com အဲလိုမျိုးလေးပေါ့။
နောက်တစ်ခုက Gamil ကနေ Facebook ကိုပို့တာ ။ ဒါလေးလည်းလွယ်လွယ်လေးပါ။ မိမိတို့ gmail ပို့နေကျအတိုင်းပဲ compose mail ကိုကလစ်ပေးပြီး To ဆိုတဲ့နေရာမှာ name@facebook.com ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်ရုံပါပဲဗျာ။ ကျွန်တော်အောက်မှာပုံလေးနဲ့ ပြထားပါတယ်။
Facebook to gmail
Gmail to facebook
ဒီတခါကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲ video သီချင်းတွေကို mp3ပြောင်းချင်သော သူများအတွက်ပါ။ ဘာဆော့ဝဲမှ မလိုပါဘူး ။ လုပ်နည်းကို ပုံလေးနဲ့အတူတူရှင်းပြပါ့မယ်။ အရင်ဆုံးအောက်ကပေးထားတဲ့ လင့်လေးကို သွားပြီးအကောင့်ဖောက်လိုက်ပါ။
အဆင့်(၁) အကောင့်ဖောက်ရန် ဒီလင့် မှာ သွားလိုက်ပါ။
အဆင့်(၂) အကောင့်ဖောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ အနီရောင်လေးနဲ့ပြထားတဲ့အတိုင်း create playlist ဆိုတာလေးကို ကလစ်ပေးပါ။
အဆင့်(၃) အဲဒီမှာ Add music ဆိုတဲ့ buttom လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအောက်က serach box မှာ မိမိ နှစ်သက်သော သီချင်း အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် youtube က သီချင်းကိုမှ ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီ search box လေးထဲမှာ youtube က လင့်လေး ထည့်ပေးရင် ရပါတယ်။
အဆင့်(၄) မိမိလိုချင်တဲ့ သီချင်းရပြီဆိုရင် သီချင်း ရဲ့ ဘေးနားက အပေါင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ အောက်ပုံမှာဆိုရင် အပြာရောင်လေးနဲ့ ၀ိုင်းပြထားပါတယ်။
အဆင့်(၅) ပြီးရင် Edit setting ကိုသွားပါ ။ လိုအပ်တာလေးတွေပြင်လို့ရအောင်ပါ။ အဲဒီမှာ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလိုထားနိုင်ပါတယ်။ Autoplay / Shuffle /Loop / privacy / အဲဒါတွေကို တော့ မိမိစိတ်ကြိုက်ပြောင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
အဆင့်(၆) အဲဒီ 2.Customize ဆိုတဲ့ အောက်မှာပဲ Skins ဆိုတာကိုရွေးပြီး မိမိစိတ်ကြိုက် player လေးတွေ ပြောင်းပါ။
အဆင့်(၇) ဒီတခါ 3.Save Playlist ဆိုတာကိုသွားပါ။ အောက်မှာ ကွက်လပ်သုံးခုရှိနေပါ့မယ် ။ မိမိထည့်ချင်တာတွေ ထည့်ပါ။ စာလုံးပါရင်ရတယ်။ Genres မှာတော့ မိမိ နားချင်သော ပုံစံကို အစက်လေးပေးပါ။ classical လား Pop လား တစ်ခုခုပေါ့။ ပြီးရင် အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ SAVE(get code ) ဆိုတာကို ကလစ်ပေးပါ။
အဆင့်(၈) ဒါကတော့ နောက်ဆုံးအဆင့်ပါ။ save ပြီးတာနဲ့ အောက်ပုံအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ ဘယ်ဘက်ထောင့်အနီနဲ့ ပြထားကတော့ တိုက်ရိုက်နားထောင်ဖို့လင့်လေးပါ။ မိမိပေးချင်တဲ့သူဆီကို အဲဒီလင့်လေး ပေးလိုက်ရင် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ mp3သီချင်းလေး နားထောင်လို့ရပါပြီ။ နောက်တစ်ချက် အပြာရောင်နဲ့ ၀ိုင်းထားတာလေးကတော့ မိမိတို့ရဲ့ ဘလော့တွေမှာ ထည့်ထားပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ code လေးပေးထားတာပါ။
တစ်ခုပြောချင်သေးတာက အပေါ်က ပုံလေးကိုကြည့်ပါ။ ညာဘက်ခြမ်းမှာ My space/ Facebook /iphone အဲဒီတွေမှာလည်း share ပြီးတော့ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ ဂိမ်းကစားချင်သူများအတွက်ပါ။ Transformer game လေးပါ ။ စက်ရုပ်တွေသတ်ပုတ် တာ မိုက်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တော့ ဆော့ရင်းနဲ့ ဒုတိယခန်းကို အခုထိမအောင်သေးဘူး။ စိတ်ဝင်စားသူများ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ။ ဖိုင်ဆိုက်ကတော့အကြီးကြီးပဲဗျာ ။ ကျွန်တော် upload တင်တာတောင် နှစ်နာရီလောက်ကြာမယ်။ ဒါပေ့မယ့်ဒေါင်းတာ အဲဒီလောက်မကြာပါဘူး။ ဒေါင်းရမှာက သုံးဖိုင်ပါ။ ဒေါင်းပြီးရင် ဖိုင်ဖြေတဲ့အခါမှာ ဒေါင်းပြီးသားသုံးဖိုင်လုံးကို တစ်ဖိုင်ထဲ စုထည့်ပါ။ပြီးမှ part 1 ကိုဖြေပေးရင်ရပါပြီ ။ ဒုတိယဒေါင်းလော့လင့်မှာ နှစ်ဖိုင်ပါ ပါတယ်ဗျာ။
လေဖြတ်ြခင်း မဖြစ်လိုသူများ အတွက် သတင်းကောင်းပါ။ မစ်ချီဂန် တက္ကသိုလ်၏ လေ့လာမှု အသစ် တစ်ရပ် အရ အကောင်းမြင်သူများသည် လေဖြတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သော အန္တရာယ် လျော့ကျမှု ရှိကြောင်း လေ့လာ သိရှိ ရသည်။ အကောင်းမြင်ခြင်း၏ လေဖြတ်ခြင်းအား ကာကွယ်နိုင်စွမ်းမှာ အကောင်းမြင်တတ်သူများသည် ကျန်းမာရေး နှင့် ညီညွတ်သော ဘဝ နေထိုင် စားသောက်မှု ပုံစံကို ရွေးချယ်လေ့ ရှိသောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသူများက ကောက်ချက် ချခဲ့ ကြသည်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်း၊ အာဟာရ ပြည့်ဝသော အစားအသောက်များ စားသောက်ခြင်း စသည့် ကောင်းမွန်သော နေထိုင်မှု ပုံစံ အတိုင်း နေထိုင်သောကြောင့် လေဖြတ်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
'' ဘဝမှာ အကောင်းဆုံး အရာတွေကိုပဲ မျှော်လင့်တဲ့ သူတွေက ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေမယ့် လမ်းကြောင်းကိုပဲ တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ဆောင်ကြ ပါတယ်။ အကောင်းမြင်တဲ့ သူတွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဗဟုသုတ ရှိတာရယ်၊ ရောဂါ လက္ခဏာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အခါမှာလည်း လျစ်လျူရှု မထားတတ်တာ ရယ်ကြောင့် ကျန်းမာ နေကြတာပါ'' ဟု သုတေသန ပြုလုပ်သူ အဲရစ်ကင်မ်က ဆိုပါသည်။
အကောင်းမြင်တတ်သူ များသည် နှလုံး ကျန်းမာရေး အကြောင်း ဗဟုသုတများ ရှိပြီး နှလုံး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် အပြုအမူများ၊ လုပ်ဆောင်မှုများကို လိုက်နာ ခဲ့ကြသည့် အတွက် လေဖြတ်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည် ဟု သူက ထပ်မံ ဖြည့်စွက် ရှင်းပြ ခဲ့သည်။ အကောင်းမြင်သူ များသည် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နှုန်း လျော့နည်းပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော ကိုယ်ခံအား စနစ် ရှိနေတတ်သည်။ အဆိုပါ လေ့လာမှုကို အမေရိကန် နှလုံးကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး လေ့လာမှုတွင် အသက် ၅ဝ နဲ့ အထက် လူဦးရေ ၆ဝ၄၄ ဦး ပါဝင်ကြောင်း နှင့် လေ့လာမှုကို အချိန် နှစ်နှစ်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နားကြပ်တပ်ပြီး လမ်းလျောက်သီချင်းနားထောင် သူများသတိထားရန်
၎င်းတွေ့ရှိချက်အား Injury Prevention ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလေ့လာမှုအား လီချင်စတိန်းနှင့် အဖွဲ့သည် ၂ဝဝ၄ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ၂ဝ၁၁ ဇွန်လအတွင်း ရနိုင်သမျှသော အချက်အလက်များအား စုစည်းလေ့လာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကာလအတွင်း နားကြပ်တပ် လမ်းလျှောက်သူများအား ယာဉ်တိုက်မှု ၁၁၆ ခုရှိခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၄-ဝ၅တွင် ၁၆ မှုသာရှိခဲ့ရာမှ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁တွင် ၄၇ မှုထိ သုံးဆနီးပါး တိုးတက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အတိုက်ခံရသူများ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံမှာ အသက် ၃ဝ အောက်များဖြစ်ပြီး ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရထားတိုက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
ဤကဲ့သို့ နားကြပ်တပ်သီချင်း နားထောင်ရင်း လမ်းလျှောက်နေစဉ် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှ အသံများကို သီချင်းသံက ပိတ်ပင်ထားသဖြင့် မကြားရသောကြောင့် ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်သဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်အား မျက်စိရှင်ရှင်ထားကာ ကြည့်ရှုရင်း သွားလာသင့်ကြောင်း လီချင်စတိန်းက အကြံပေးထားပါသည်။
(၁) Box Jellyfish
ကမ္ဘာ.အဆိပ်အပြင်းဆုံး ဆုကိုရရှိထားပါတဲ. ဂျယ်လီငါး(မြန်မာအခေါ်ဂျက်လီငါး ၊ရေတန်းငါး)ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျယ်လီငါးရဲ.အဆိပ်ဟာလူရဲ.နှလုံး၊ အာရုံကြောစုစည်းမူ.စနစ်၊ အရေပြားဆဲလ်စတာတွေကို ချက်ခြင်းစီး
၀င်ပျံနှံနိုင်ပါတယ်။ ဂျယ်လီငါးရဲ.အညံဆုံးကို ခန္တာအစိတ်အပိုင်းတခုသည်ပင် လူတယောက်အား မခံမရပ်အောင်အလွယ်တကူ နာကျင်စေပါတယ် ထိုသို.ထိတွေခံလိုက်ရသော သူ၏ဒုက္ခသည်ကား စိတ်တုန်လူပ်ခြောက်ခြား၍ နှလုံးကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်ပဲ ကမ်းခြေရောက်အောင် မကူးခတ်နိုင်ပဲ သေဆုံးရတတ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကမ်းခြေများ မိုးတွင်းကာလ တွင် ရေတန်းငါးတခါတရံ ကျရောက်တတ်ပြီး ထိုငါးနှင်.ထိမိပါက မီးလောင်ဒဏ်ရာကဲ.သို. ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။အဆိပ်ပြင်းလှတဲ. ဂျယ်လီငါးကတော. အာရှနဲ.သြစတေးလျှ ပင်လယ်ရေပိုင်နက်အချို.မှာ တွေရတတ်ပါတယ်။
(၂) King Cobra
လူသိများလှတဲ မြွေဟောက်ဘုရင် ဟာ အဆိပ်ရှိမြွေသတ္တ၀ါတွေထဲမှာအရှည်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။၅.၆ မီတာ(၁၈ပေ၅လက်မခန်.)ထိကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ သူ.ရဲ.အခြားနာမည်တခုကတော. Ophiophagus hannah ဖြစ်ပါတယ်။Ophiophagus ကို လုံးစေ.ပတ်စေ. ပြောရမယ်ဆိုရင် မြွေစားသူ လို.ပြောရမှာဖြစ်ပြီး သူဟာ မြွေအချင်းချင်းလဲပြန်စားပါတယ်။တချက်ကိုက်ရုံနဲ. လူမပြောနှင်. အရွယ်ရောက်ပြီးသော အာရှဆင်တကောင်ပင်လျှင် ၃နာရီအတွင်းသေစေနိုင်သည်အထိ အဆိပ်ပြင်းလှသည်။အာရှတိုက် တောင်ပိုင်းနှင်.အရှေ.တောင်အာရှတောနက် များတွင်တွေရတတ်သည်။
(၃) Marbled Cone Snail
စကျင်ကျောက်ပုံစံနှင်ခရုဖြစ်ပါတယ်။ ကြည်.လှသလောက် အဆိပ်ပြင်းလှတဲ.အကောင်တွေထဲမှာ သူလဲပါပါတယ်။ သူ.အဆိပ်ရည်တစက် နှင်.ပင်လူ၂၀ထက်မနည်းသေစေနိုင်ပါတယ်။ ဆားငံရည်ပျော်
၀င်နေတဲ.ရေနွေး ရှိရာဒေသတွေ မှာတွေရတတ်ပါတယ်။ သူဆူးထိမိခဲရင်အနှေးနှင် အမြန်ကြီးမားစွာ
ဒုက္ခပေးတဲ. အကျိူးခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်ရမ်ခြင်း၊မလူပ် ရှားနိုင်ဘဲတဆစ်ဆစ်ခံစားရပြီးဆိုးဝါးတဲ.ဖြစ်စဉ်အဖြစ် သွပ်ချာပါဒ လိုက်သလို တုံဆိုင်းသွားပြီး အသက်ရူရခက်လာပြီး စသည်.ရောဂါလက္ခဏာ များပြတတ်ပါတယ်။
(၄) Blue-Ringed Octopus
အပြာရောင်လပ်စွပ်ကွင်း ပုံစံလေးနဲ.ရေဘ၀ဲပါ။ အရွယ်အစားကတော.ဂေါက်သီး တလုံးရဲ . အရွယ်ခန်.ရှိ.ပါတယ် ။ သူ.လဲလူတယောက်ကို လွယ်လွယ်သေစေနိုင်ပါတယ်။လူ၂၆ခန်.ကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသေစေနိုင်တဲ.အဆိပ် ပမာဏကို သယ်ဆောင်ထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ.လက်တံနဲ.ထိမိ.တာနဲ. အာရုံကြောများမှ တဆင်အဆိပ်ပြန်.၀င်ပြီးကြွက်သားများ ပျောညံအားနည်း
လာပြီးလေးလံထုံထိုင်းလာကာ အသက်ရူရပ် သေဆုံးတတ်ပါသည်။ဂျပန်နှင်သြစတေးလျှရှိ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ဒီရေ ၀င်ရောက်တဲ.ရေကန်များ မှာတွေ.နိုင်ပါတယ်။
(၅) Death Stalker Scorpion
ဒီကင်းမြီးကောက်ကတော. ကိုက်ခံရပြီဆို အာရုံကြောများမှအဆိပ်ပြန်.ပြီး လေငန်းစွဲသလို ဖြစ်
မေ.မြှောသေဆုံးနိုင်ပါတယ်။ သူ.ကိုတော. အာဖရိကတောင်ပိုင်းနှင်. အရှေ.အလယ်ပိုင်းတွေမှာတွေရ
ဒီကျောက်ငါးကတော အလှပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ရင်ဆုမရနိုင်ဘူးလား။ သူလဲကမ္ဘာ.အဆိပ်ပြင်းငါးတမျိူးပါပဲ ထိတ်လန်.ပြိးတစ်ရူးတွေသေဆုံးကာနာရီးအနည်းငယ်အတွင်းမှာ ဆေးကူသမူမပြုလုပ်ရင် သေဆုံနိုင်ပါတယ် ပိစိဖိတ်နှင်အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာအပူပိုင်းရေတိမ်သောနေရာနှင်. ပင်လယ်နီqueensland သောင်ခုံကျောက်
တန်းများ တွင် တွေ.ရှိနိုင်သည်။
(၇) The Brazilian wandering spider
ဘရာဇီးမှာလှည်. လည်သွားလာနေတဲ. ဒီငှက်ပျောသီးပင်.ကူဟာလူကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်ဆုံးဖြစ်ပြီး နေ.ပိုင်းတွေမှာ အိမ်ရဲ.အတွင်းပိုင်း အင်္ကျီင်္ ၊ဖိနပ်၊ကားစသည်ဆို.မှာ ပုန်းခိုတတ်ပါတယ် ။
(၈) Inland Taipan
အပူပိုင်းမြွေဒေသမှ အဆိပ်ပြင်းလှတဲ. မြွေပါပဲ ၄၅ မိနစ်အတွင်းမှာ သေစေနိုင်ပါတယ်။
(၉) Poison Dart Frog
အဆိပ်လက်နက်နဲ.ဖားလှလှလေးပါ။ မိုးမျာတဲ.တောနက်ထဲမှာပြေး လွားနေတတ်ပြီးတခါတ ရံတောင် အမေရိကအလယ် ပိုင်းမှာတွေရပါတယ်။၂ လက်မခန်အရှည်ရှိပါတယ်။ လူနဲ.အခြားနို. တိုက်သတ္တ၀ါတွေကို သေစေနိုင်ပါတယ် ။
(၁၀) Puffer Fish
pufferငါးအကိုက်ခံ ပြီဆိုရင် ရေစီကြမ်းတဲ.နှလုံးကိုအရိုက်ခံရသလိုပါပဲသူ.ရဲ.နုတ်ခမ်းထူထူနဲ.လျှာတွေက လဲအဆိပ်ရှိပါတယ်။ အကိုက်ခံရတဲ. လူဟာကြွက်သားတွေတုန်.ဆိုင်းသွားမယ်ရင်ဘက်ပိုင်းနှင်. ၀မ်းဗိုက်ပိုင်းကြား ထိခိုက်ခံစားရပြီး၂၄နာရီအတွင်း သေနိုင်ပါတယ် ။
အပြင်မှာ တကယ်တွေ့ခဲ့ရင်တော့ ဝေးဝေးကရှောင်နော်..........:)
Posted by mhuthaw 15 comments